Kwenziwa i-encyclopedia enamakhasi angama-500 kwezokwelapha zendabuko - i-Afrikhepri Fondation
ngoLwesibili, meyi 11, 2021
I-encyclopedia yamakhasi e-500 ngemithi yendabuko idalwa
Funda: 16 amaminithi
Mnaphezu kobuhlungu obukhulu besikhathi sethu, amasiko, umlando, isiko kanye nokwazi izinyanya kuyizimpawu kithi. Izilimi nezinganekwane ziyanyamalala, kwesinye isikhathi ngisho nezizwe zonke ziyaqothulwa. Kodwa-ke, isizwe sama-Amazonia - amaMatsés waseBrazil nasePeru - asungule i-encyclopedia yezokwelapha yolwazi lwendabuko. I-encyclopedia, ehlanganiswe ama-shaman ama-5, asizwa yiqembu lokongiwa kwemvelo Acate, imininingwane yesitshalo ngasinye semithi yokwelapha iMakedé ekwelapheni kwanoma yiluphi uhlobo lwesifo.
I-encyclopedia yemithi yendabuko iyona yokuqala yohlobo lwayo. Lesi yisikhathi sokuqala ukuthi ama-america ase-Amazonian abhale ulwazi lwabo lwezokwelapha ngolimi lwabo lomama besebenzisa amagama abo, kusho uChristopher Herndon, umengameli kanye nomsunguli we-Acaté, lapho bexoxa ngeMongabay (cf. interview ngezansi).
I-encyclopedia ka-Matsé ishicilelwe kuphela ngolimi lwe-Matsé ukuvikela ulwazi lwezokwelapha lwendabuko lwezinkampani ezinkulu nabacwaningi abaye bazama ukweba lolu lwazi esikhathini esidlule. Leli qoqo lezokwelapha lenzelwe ukufundwa kwabakwa-Shaman abasha abafisa ukulandela amasiko. Ukudluliselwa kolwazi.
"Umdala uMasté, owaziwayo emphakathini, wafa engakwazi ukudlulisela ulwazi lwakhe. I-Acaté kanye nezinhloko zikaMatsés zanquma ukwenza le encyclopedia ibe yinto ebalulekile ngaphambi kokuba abadala bazifundele, "kusho uHerndon.
I-Acate isiqalile uhlelo lokushintshanisa phakathi kwabadala bakaMatsés nabafundi abasha. Ngalolu hlelo lokuxhaswa, abantu basekhaya banethemba lokulondoloza indlela yabo yokuphila njengoba benakho amakhulu eminyaka.
U-Herndon uyachaza: "Namuhla, ulwazi lwezitshalo zokwelapha emiphakathini yendabuko lukhula ngokushesha futhi ngokushesha, kuyisihluku kulabo bantu abalahlekelwa yizinto zonke." "Indlela eyakhiwe nguMatsés ne-Acaté ingalandelwa njengesibonelo kwezinye imiphakathi yendabuko, ukuze ilondoloze ulwazi lwabazali babo."
Ingxoxo noCRISTOPHER HERNDON, umfundi we-PhD emithi.
Mongabay: Kungani le encyclopedia ibaluleke kangaka?
UChristopher Herndon: Lesi yisikhathi sokuqala ukuthi ama-shaman e-Amazon abhale ulwazi lwabo lwezokwelapha ngolimi lwabo lwamazwe basebenzisa amagama abo. Phakathi namakhulu eminyaka, ulwazi lwamazwe ase-Amazoni luye lwaba ngamazwi. Konke lolu lwazi, lezi zindlela nezindlela ziye zavela ngenxa yokuxhumana okujulile okungokomoya uMatsés anakho ngemvelo. Bahlala engxenyeni yezwe lapho izinhlobonhlobo zezinto ezinhlobonhlobo zemvelo zihlaba umxhwele kakhulu. Baye bazi ulwazi lwemikhiqizo yokuphulukisa yezitshalo nezilwane ezitholakala lapho.
Kodwa ezweni lapho ushintsho lwezamasiko luyaqhubeka lukhungathekisa, ngisho nemiphakathi engasodwa iyaphela.
Asikwazi ukunciphisa ijubane lapho lolu lwazi lulahlekile uma umphakathi oqhelile uxhumana nomhlaba wangaphandle. Ngokomlando, ukulahlekelwa kwezinhlelo zezempilo eziphilayo zamaqembu amaningi ase-Aboriginal kubonisa ukuthi kuncike ekutheni kuncike ngokuphelele ohlelweni oluyinkimbinkimbi futhi olulinganiselwe ezindaweni ezikude kakhulu. Akumangazi ukuthi emazweni amaningi okuhlala emiphakathini yendabuko ukushona nezifo eziphezulu kakhulu.
Imephu ebonisa iningi lendawo yaseMatsé, nakuba ingafaki imiphakathi yaseMatsés Brasilian yeVale do Javari.
Isikweletu se-Photo: Acate / Instituto Investigaciones de la Amazonia Peruana. Chofoza kusithombe ukuze ukhulise.
UMatsés ukhathazekile ngokulahlekelwa isiko labo kanye nobubha besimiso sezempilo. Yingakho lesi sinyathelo sibonisa okuningi kubo. Indlela abaye bahlakulela ukuvikela nokulondoloza ulwazi lwabo ingaba yisibonelo eminye imiphakathi ebhekene nezinkinga ezifanayo. Ngenhloso yomnyango wokulondolozwa obanzi, siyazi ukuthi kukhona ukulungiswa okuqinile phakathi kwendawo yokuphila ehleliwe kanye nendawo yokuhlala yokuhlala. Lokhu kugcizelela umqondo wokuthi ukuqinisa uMaté Culutre kuyindlela ephumelela kakhulu yokuvikela izindawo zehlathi ezishisayo.
Mongabay: Kungani kuyisikhathi esifanele sokuqoqa lolu lwazi?
UChristopher Herndon: Ulwazi lukaMatsé nokuhlakanipha kwezizukulwane zathola ukuthi sekuqothulweni. KwaMatsés athile asendulo, ulwazi lwabazali bawo luhlala luqinile ngoba ukuxhumana nomhlaba wangaphandle kuvela eminyakeni engu-50 kuphela edlule. Abaphulukisi babengabantu abadala ngesikhathi sokuxhumana okuqala, base bevele bazi kahle ithalenta labo ngaphambi kokuphikiswa izithunywa zevangeli kanye nohulumeni. Ekuqaleni kweprojekthi, ama-shaman ayengenandaba nabantu abancane.
"Umdala uMasté, owaziwayo emphakathini, wafa engakwazi ukudlulisela ulwazi lwakhe. I-Acaté kanye nezikhulu zikaMatsés ziye zanquma ukwenza le encyclopedia ibe yinto ebalulekile ngaphambi kokuba abadala bebenolwazi lwabo. " Akukhona ngokugcina ukudansa kwendabuko noma izingubo. Kuphathelene nempilo yemiphakathi yabomdabu kanye nezizukulwane zabo ezizayo. Izigxobo azikwazi ukuphakama.
Mongabay: I-encyclopedia ibukeka kanjani?
UChristopher Herndon: Ngemuva kweminyaka engu-2 yomsebenzi omkhulu noMatsés, i-encyclopedia yamakhasi e-500 ihlanganisa izahluko ze-5 zabahlengikazi abaphezulu kakhulu bama-Matsés. Ukwengezwa ngalunye kuhlukaniswe igama lesifo ngesigaba esichazayo kufaka indlela yokubona izimpawu, imbangela, isitshalo okufanele sisisebenzise nendlela yokulungisa ukwelashwa, kanye nezinye izindlela zokwelapha. Izithombe zezitshalo ngasinye, ezithathwe yiMatsés ngokwazo, zibonisa ukufaka ngamunye.
I-encyclopedia ibhalwe kusukela ekubukeni kwama-shamans futhi ngokwabo. Bachaza ukuthi izilwane zixhunywe kanjani emlandweni wemvelo wezitshalo nezifo. I-encyclopedia yangempela yama-shamanic, ehlelwe ngokuphelele yi-shamans. Lokhu kungowokuqala kohlobo lwayo.
Mongabay: Ingabe unethemba lokuthi le encyclopedia ivuselela imizamo emikhulu yokulondeka?
UChristopher Herndon: Sikholelwa kakhulu ukuthi izizwe ezinamandla ziyiqhinga eliphumelelayo kakhulu futhi elingabizi kakhulu lokugcina amahlathi ashisayo. Akuyona into engaqondakali ukuthi izingxenye eziqondile zehlathi laseNotropic ziseduze kakhulu nezindawo zokuhlala zemiphakathi yasemdabu. Bayaqonda izindinganiso zamahlathi ngoba zixhomeke kulo. Lobudlelwane buyadlula umqondo we-utilitarian. Siphinde sikhulume ngokuxhumana okungokomoya okubonakala kunzima ukuyiqonda kusukela ekubukeni kweNtshonalanga kodwa nokho ngempela.
Iningi lezinsongo ezisezemvelo esizizwayo ezindabeni - amafutha, ukutshala kwemithi, izimayini, njll. - zivela ezimboni ezibonakalayo ezilindelekile ukuthi zibuthakathaka ukubumbana kwezenhlalo zamaqembu omdabu maduzane uxhumane nezwe langaphandle, futhi basebenzisa ngokunenzuzo imithombo yabo nokuthembela kwabo okukhulayo ezweni langaphandle.
Ukuzimela kuyisihloko esihlanganisayo sezinhlelo ze-3 ze-Acate, umnotho osimeme, imithi yendabuko kanye ne-agrology. I-Acate ayiyona imvelaphi yalezizindawo eziyinhloko zokulondolozwa kwe-3; Bathuthukiswa phambi kukaMatsés ngesikhathi sezingxoxo nabadala. Yilabo abawazi ukuthi indlela engcono kakhulu yokuvikela isiko labo nensimu yabo ukuthola isikhundla samandla nokuzimela.
I-encyclopedia iye yabuyekezwa futhi yahlelwa phezu kwezinsuku ezimbalwa phakathi kwezinduna zamaMatsés nama-shaman zasendulo. Isikweletu se-Photo: Acate.
Kusukela kumbono wokulondolozwa kwemvelo, ama-Matses avikela ngaphezu kwamahektha ayizigidi ezingu-3 zamahlathi ashisayo ePeru kuphela. lokhu Indawo ihlathi elihle kanye ne-carbon eningi kanye nokuphila kwezinhlobonhlobo. Imiphakathi yaseMatsés Brasilian eceleni kwemifula yaseJavari neYaquanaana emngceleni osentshonalanga we-Matsé indawo yokugcina yaseVale do Javari. Liyindawo engalingani nobukhulu base-Austria, inamanani amakhulu kunazo zonke zezizwe ezizimele ngokuzithandela. Emngceleni oseningizimu wamasimu aseMatsés, emfuleni ophezulu we-Yaquerana, amanga I-Sierra del Divisor, isifunda ngobuhle obuhle, enikezwe izinhlobonhlobo ezihlukahlukene nezizwe ezihlukene. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ama-Matsés, nakuba ayengabakhileyo abangu-3 000, angcono kakhulu ekuvikeleni amahlathi amakhulu asezindaweni ezishisayo kanye nezizwe abazivikele kuzo. Ukubanika lo mthwalo wemfanelo kuyisinyathelo esikhulu sokulondolozwa.
Mongabay: Uthi i-encyclopedia ingumkhakha wokuqala nje weqhinga elikhulu lika-Acate, yiziphi ezinye izakhi ezidingekayo ukuze kugcinwe uhlelo lwabo lwezempilo lendabuko?
UChristopher Herndon: Ukugcwaliseka kwale encyclopedia kuyimlando, kuyisinyathelo esibalulekile sokuqala sokuvikela uhlelo lwezempilo lukaMatsés kanye nokuhlakanipha kwabo nokuzimela kwabo. Kodwa i-encyclopedia yedwa ayinayo isisindo esanele sokugcina ukuzimela kwayo kwamanje, ngoba uhlelo lwabo lokuphulukisa lusekelwe ekuhlangenwe nakho okukuphela kokufunda okungaqinisekisa.
Ngeshwa, izithonya zangaphandle ziye zaxosha abantu abasha ezindaweni ezikude. Akekho u-shaman owayenezifundo. Kodwa-ke, amadolobhana asekhona futhi asebenzisa ulwazi lwezitshalo zokwelapha zamaphilisi zasendulo, iningi lawo lingaphezu kweminyaka eyi-60 ubudala.
Phakathi Isigaba II, uhlelo lokufunda, shaman ngamunye - abaningi babo ababesebenza ku izahluko encyclopedia - uzobe ephelezelwa Matsés abasha kuleli hlathi ukuze ufunde ukuthi amakhambi nendlela yokusiza iziguli . Uhlelo umsebenzi waqalwa ngo 2014 edolobhaneni Esitrón ngaphansi kokuqondisa the shaman omkhulu Luis Dunu Chiaid. Nge impumelelo le test Esitrón, le Matsés baye yanquma ngazwilinye ukuthi lo hlelo lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako zonke nasemizaneni, nasezinqabeni ngokuyinhloko labo wayesenemali eningi ngaphezu abaphulukisi.
Ukwengeza, kwaqinisekiswa ukuthi uhlelo lwe-agro-forestry manje luzofaka izitshalo zokwelapha. Kuzosekelwa emqondweni wokuphulukiswa kwehlathi, owadalwa omunye wabahlengikazi abaningi eNuevo San Juan futhi ephethwe yindodana yakhe u-Antonio Jimenez. Emazweni angaphandle, ihlathi lifana nehlathi elimnandi elisemngceleni wamapulazi. Lapho kukhona umholi we-shaman ochaza umsebenzi wesitshalo ngasinye, siyaqala ukubona ukuthi konke okuzungezile kungasetshenziswa ngezinhloso zokwelapha. Lezi zitshalo zihlonywa ngabahlengikazi bakaMatsés ekwenzeni izixazululo zabo.
Imivini yamahlathi nezinye amakhowe azikhuli ezindaweni ezivelele elangeni, ngakho-ke ihlathi lemvula liyindawo ekahle yokusabalalisa. Indawo yehlathi nayo inhle kakhulu kumaMatsés njengamaminithi angu-10 15 kuphela ukusuka emzaneni wabo. Uma ingane yakho igula, kungcono kakhulu kunokuthatha amahora we-4 ukuthola ukwelashwa.
Mongabay: I-encyclopedia ikhona kuphela encwadini kaMatsé ukuze iyivikele ekukhulekeleni kwe-bioprospection kanye nokweba kwesiko samaMatsé. Ingabe bayesaba ngempela i-biopiracy?
UChristopher Herndon: Ngeshwa, le ndaba iqukethe isibonelo sokuba. I-Matsés ithinteka ngokukhethekile, kuyingozi kakhulu ngempela kubo. Ukunikeza isibonelo; ukuvalwa kwezikhumba kwePhyllomedusa frog (Phyllomedusa bicolor) kusetshenziswa ngesikhathi sokuzingela uMatsé. Lezi zimfihlo, ezicebile kuma-peptide e-bioactive, ziqondiswa ngokuqondile emzimbeni ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza ekushiseni noma ekusikeni. Ezikhathini ezimbalwa, i-toxin ibangela umsebenzi we-cardiovascular and reaction response eziholela esimweni sokuqaphela isigamu kanye nobuciko obukhulu kakhulu bezinzwa.
Nakuba lezi zinhlobo amaxoxo Phyllomedusa ubabonisa kulo lonke enyakatho-Amazon, kukhona kuphela ukhweshe izizwe Matsés futhi Panoans ukusebenzisa lolu ikhambi emangalisayo. Ngemva kokubika irekhodi lolu lwazi, nophenyo eziningana laboratories wabonisa ukuthi uketshezi aqukethe cocktail eyinkimbinkimbi peptides nge izakhiwo vasoactive, nezidakamizwa futhi imithi elwa nawo. Izinkampani ezithaka amakhambi namanyuvesi isicelo se-patent kulezi peptides, ngaphandle ukwabela wesikweletu izizwe okuyiwona lokhu okutholakele inendima enkulu. I-peptide ye-antifungal ye-frog iye yafakwa ngisho nangokwenziwe ngaphakathi kwamazambane.
Ukwesaba i-biopiracy ngeshwa kungokoqobo. Amaqembu okulondolozwa kwama-Amazon kanye nososayensi baye benza amaphrojekthi abonisa ulwazi lwendabuko lwezilwane zasendle zasendaweni. Babhala izinto ezifana namagama ezinyoni, kodwa abazange bathinte izitshalo zokwelapha ngenxa yokwesaba ukuthi bayosolwa ngokuhlanganyela e-biopiracy. Ukulahlekelwa okusheshayo kolwazi lwezokwelapha lwendabuko ngamaqembu omdabu kuyisiyaluyalu emiphakathini. Indlela yokwakhiwa kukaMatsés ne-Acaté ingalandelwa njengesibonelo kwezinye imiphakathi yendabuko, ukuze ibalondoloze kule nkinga.
Mongabay: Iyiphi inqubo ye-Acate futhi ivikela kanjani ulwazi lwezibalo ezizenzakalelayo?
UChristopher Herndon: I-Acaté futhi i-Matsés iye yasungula indlela entsha yokuvikela ulwazi lwabazali ngezitshalo zokwelapha kusukela ekuqaphelisweni, ngenkathi evikela lolu lwazi ekubambeni nasezingxenyeni zangaphandle. I-encyclopedia ibhalwa kuphela kuMatsé. Yenzelwe nakwaMatsés, ngeke kube khona izinguqulo eSpanishi noma ngesiNgisi. Akukho okushiwo igama lesayensi, noma isithombe sezimpawu zezitshalo.
Isahluko ngasinye se-encyclopedia yendabuko sabhalwa ngumuntu ohlaziyiweyo owaziwa ngumphakathi. I-shaman ngayinye yayihambisana nomfana osemusha uMaté owaqala ukubhala izitshalo zokwelapha ngokubhala nangesithombe kusukela ngenyanga kuya kwenyanga. Amathekisthi nezithombe zahlanganiswa futhi ziphinde zenziwe ikhompyutha nguWilmer Rodríguez López, onguchwepheshe uMaté ekubhalisweni kolimi lwakhe.
Phakathi nomhlangano, ama-shamans ahlaziya ukuhlanganiswa kwe-encyclopedia, okushicilelwa kwayo okungaphezu kwamakhasi we-500. Manje sekuqedile, kuzohlelwa futhi kushicilelwe ama-Matsés. Awekho amanye amakhophi azokhishwa emphakathini wakwaMatsé.
Sithemba ukuthi impumelelo nemizamo yendlela esetshenziselwa i-encyclopedia izobonakala kuwo wonke umphakathi wase-Amazoni nangaphezulu. Ngaphezu kwalokho, sesivele sibona ukuthi lokhu kuveza izithelo kwezinye izinhlangano.
Mongabay: Kusobala ukuthi umgomo ukuvikela isiko nolwazi lweMatsés, kodwa ulwazi lwabo lwezokwelapha lungase lusize abantu emhlabeni jikelele. Zikhona yini izimo ezithile lapho uMatsés nabakwaMacan kufanele bakhothamele khona ukuze babelane ngolwazi lwezitshalo zama-Amazon zokwelapha? Abathembi muntu?
UChristopher Herndon: I-acate ayikwazi ukukhuluma egameni lama-Matses ngakho. Engingakusho emva kokusebenza nabaphulukisi kulo lonke i-Amazon ukuthi ngokuvamile bazimisele ukwabelana ngolwazi lwabo uma sibahlonipha. Futhi banesifiso esikhulu mayelana nezinhlelo ezahlukene zokuphulukisa, kuhlanganise nazo.
Ezinye izidakamizwa, ezifana ne-quinine ne-aspirin, zakhiwe ngokufunda kwabahlengikazi bendabuko. Ngenxa yesimo sezombusazwe nokwesaba wezizwe biopiracy, kuya kuba nzima ngoba weenhlahla kahle abanezinhloso ezinhle, anikezelwe ukusatshalaliswa ngokulingana izinzuzo, ukwenza imizamo enjalo. Esikhathini umkhawulo isikhathi yokufunda nokuba yinkimbinkimbi ulwazi lwendabuko, kunzima kakhulu ukuhlola ukuhambisana photochemical. I-Encyclopedia kuyindlela ukuze Matsés ukugcina umnyango ovulekile amathuba ukuqinisekisa ikusasa bazokwazi izwi.
Akufanele sikhohlwe ukuthi ngaphambi kokufika kwale encyclopedia, uhlelo lwezempilo lwendabuko lweMatsés lwaluseduze ukunyamalala ngenxa yamathonya eNtshonalanga yezwe. I-Matsés ihlala ezindaweni ezikude kakhulu kunzima ukukunikeza. Imitholampilo yezokwelapha, ikakhulukazi leyo etholakala enyakatho komfula, ngokuvamile iphuma emithini eyisisekelo kakhulu. Lezi zidakamizwa ngeshwa zidinga ukuphatha lesi sifo ezifana ne-malaria falciparum, esethulwa ngokuxhumana nomhlaba wangaphandle. I-Matsés, ngokuvamile engenayo imali, kufanele ikhokhe ngamapokhethi awo kule mithi ebiza kakhulu yaseWestern. Kuzo zonke izindawo engizivakashele kuzo, ama-microscopes egazi aphethwe yi-malaria aphukile. Uma siqhathanisa, siphila ezweni lapho yonke into iningi, ngisho nesistimu yezempilo. Uma ingxoxo ingasungulwa, ngokwami ​​ngicabanga ukuthi kufanele iqale ngombuzo wokusekela uMatsé namuhla, kunokuzama ukubasiza esikhathini esizayo.
Mongabay: Abaningi bakholelwa ukuthi imithi kanye nokulondolozwa kwamahlathi ezishisayo kukhona amasimu amabili ahlukene. Sitshele ukuthi impilo ihlobene kanjani nemvelo?
UChristopher Herndon: Impilo yabantu kanye nesiko labo isondelene kakhulu. Ngokwesibonelo, izimo zezokwelapha futhi tekuhlalisana kutemnotfo nzima Haiti kuyahambisana ne yokuthi 98% yezwe kuthintwa kwamahlathi ukuthi amaningi ala masimu useke wabhekana nemiphumela elimazayo ukuguguleka kwenhlabathi. Umngcele phakathi Haiti kanye Dominican Republic kungenziwa ngokucacile ngesethelayithi yi oluhlaza kanye brown sokuhlukanisa ezindaweni ezimbili, esinye isibonelo ngeshwa nokukwazi ukwengamela imithombo yezidingo umehluko. Kunjalo nangezithombe zase-Ethiopia, esiyazi ukuthi eminyakeni embalwa edlule, izwe lijabulela ihlathi elihle.
Ikusasa lamaMatsés lihlobene kakhulu nekusasa lehlathi labo. Ukuvikela nokuqinisa isiko labo kuvikela impilo yabo emanxebeni ezinkathi zanamuhla ezifana nesifo sikashukela, ukungondleki, ukucindezeleka nokudakwa ngokweqile. Yiloluhlobo lwesifo esithinta kuqala izizwe lapho kuxhumana nomhlaba wangaphandle. Kubukeka ngale ndlela, ukulondolozwa kwezinto eziphilayo kuyindlela evikelekile kakhulu futhi ephumelelayo yokuvikelwa kwesistimu yezempilo yendabuko.
Mongabay: Le encyclopedia izosiza kanjani ukulondoloza isiko lamaMatsé?
UChristopher Herndon: Ngezinye izikhathi ithuluzi elilula linamandla njengombono. Umqondo wukuthi isiko, amasiko kanye nokuphila okuthile kuyizinto ezibalulekile ekuphileni. Akufanele sibe namahloni ngakho. Umqondo wokuthi ihlathi elishisayo, elikhonza njengendlu kwabanye, linamakhono amakhulu kakhulu kunawo wonke amafutha noma ama-mahogany (afuna ukukhiqiza ifenisha yokunethezeka). Umqondo olula wokuthi ulwazi lwemvula yamahlathi alubuyisi abantu babuyele esimweni sabo sokuqala, kodwa ubapha isikhundla esibalulekile emnyangweni wokugcinwa kwemvelo. Le encyclopedia iyisinyathelo sekhonkrithi sokubhukuda igebe eliphakathi kokuqala ngaphambi kokuba liphuze kakhulu. Yisinyathelo esinika amandla ekuhlakanipheni kwabadala futhi unikeza indawo yamahlathi indawo yayo ekufundeni ukuphulukisa.
Mongabay: I-encyclopedia yaqedwa ngesikhathi kubuthwa izikhulu zikaMatsé ezivela ensimini yonke kanye nabakwa-shaman besizwe. Kwakunjani umkhathi phakathi nalomhlangano?
UChristopher Herndon: Lo mhlangano ongakaze ube khona wawuqhutshelwa kwelinye lamadolobhana ahlukene kakhulu ensimini yaseMatsé. Kunzima kakhulu ukuchaza ngamazwi umzwelo wabo bonke lapho amaMates asendulo ekhuluma ngomzabalazo abaye bawuthatha isikhathi eside ukuvikela indawo kaMatsé. Abaningi babo baphenduka izinyembezi zabo. Ummeli oyinhloko ucele abasha ukuthi bathathe isibani ngesikhathi seqembu elidala, njengoba bezenza ngokwabo nabakhulu babo. Sekuyiminyaka eyi-15 engisebenza ngayo ekulondolozeni i-bioculture e-Amazon. Lokhu kungenye yezinto ezingakhunjulwa kakhulu enginakho, ukukhuluma ngokucacile nokuzimisela kwalaba bantu. Kuye kwaqaphela ukuthi uMatsés, ejulile ngaphakathi, kukhona amaqhawe ayelokhu elwa iminyaka ukuvikela indawo yawo.
Ulwazi: Chris Herndon ukhonza ebhodini leMongabay.org kanti uRhett Butler, umsunguli weMongabay, ukhonza ebhodini le-Acate Amazon Conservation. U-Rhett wayengabandakanyeki enkulumweni yale ngxoxo.
I-United Souls, umkhiqizo we-t-shirt owenziwe yi-Ivorian ozibophezele
Hlola izandla ku-Gold (2009)
Amathiphu okukhulisa izinwele ngokushesha
Isichazamazwi semvelaphi yamagama neziteketiso zamazwe ase-Afrika - u-Arol Ketchiemen
I-Afrostream, iplatifomu enikezela ngamafilimu ezizukulwane zase-Afro